Xukuumadda Soomaaliya: ”Dalka way ka dhici kartaa doorasho qof iyo cod ah” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xukuumadda Soomaaliya: ”Dalka way ka dhici kartaa doorasho qof iyo cod ah”
Xukuumadda Soomaaliya: ”Dalka way ka dhici kartaa doorasho qof iyo cod ah”
Muqdisho (Halqaran.com) – Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa waxay u muuqataa mid bedeshay fekerkeedii hore ee ahaa inay adag tahay in dalka ka qabsoomi karto doorasho qof iyo cod ah, marka aad eegto xaaladda amni ee dalka.
Ra’iisal Wasaare Ku xigeenka dalka, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta sheegay inay dalka ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah.
Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa tilmaamay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, ay labaduba doonayan inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, iyadoo lagu saleynayo Nidaamka Xisbiyada.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay doonayan in shacabka Soomaaliyeed ay go’aankooda qaataan, isla-markaana ay soo doortaan ciddii ay doonayaan, haddii ay dib u soo dooranayan dowladda haataan jirta iyo haddii kalaba.
“Waxaan rabnaa Umadda Soomaaliyeed taladeeda inay qaataan oo ciddii ay rabaan doortaan,haddii aynu tartameyno oo dib ay noo dooranayaan oo shan sanadood oo dambe oo halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog aynu gaarsiineyno. Umadda Soomaaliyeed bay u taallaa laaakiin waa muhiim in dalka doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo oo Nidaamka Xisbiyadu hirgalo.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka oo ka hadlayay daahfurka qorshaha sagaalaad ee Qaranka.
Ugu dambeyn, beesha Caalamka ayaa qabta in doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya ka qabsoomi karto sanadka soo socda, maadaama ay horey uga dhacday, sida ay ku andacoonayan dalalka Ciraaq iyo Afghanistan.
beesha Caalamka ayaa qabta in doorasho qof iyo cod
ka dhici karin Somaliya
Ra’iisal Wasaare Ku xigeenka dalka Mahdi